Aluminium budada budada, AlB2 - Goodao Technology Co., Ltd.
Aluminium boride (AlB2) waa nooc ka mid ah iskudhafka binary ee ay sameeyeen aluminium iyo boron.
Waa casaan adag oo casaan ah heerkulka iyo cadaadiska caadiga ah. Waxay ku xasillan tahay aashitada milanka kuleylka ah, waxayna ku dhalataa aashitada hydrochloric kulul iyo nitric acid. Waa mid ka mid ah labada iskudhis ee aluminium iyo boron.
Caanaha molecular AB2
Lambarka CAS 12041-50-8
Cufnaanta 3.19 g / cm3
Barta dhalaalida 1655C
Hore: Kalsiyum budada budada ah, CaB6
Xiga: Budada Silicon Boride, SiB6
Aluminium budada budada ah
Warshadaha budada Aluminium
Warshad budada ah oo aluminium ah
Soosaaraha budada Aluminium
Soosaarayaasha budada ah ee aluminium
Aluminium boride budada Qiimaha